Whitening Ezé Atụmatụ Ị Pụrụ nwalee Today! | Best Way to whiten Ezé Guide
Ọtụtụ ndị na-amalite inwe nchegbu banyere inwe acha ọcha ezé dị ka afọ iri na ụma. Nke a dream nwere ike mfe-adị ezie na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ. I nwere ike inwe acha ọcha ezé ịmụta ihe ndị kasị mma usoro si n'ebe na-esonụ ezigbo ndụmọdụ. The ọmụma n'ihu ebe a ga-agwa gị na whitest ezé kwere omume.
Ịnọ n'ebe na-emepụta sịga, kọfị, na wine. Onye ọ bụla n'ime ndị a nwere kemịkal na-rube isi na discolor ezé gị. Ọ bụrụ na ị bụ na-adịghị njikere iji belata ma ọ bụ kwụsị ịṅụ bụla n'ime ndị a, mgbe ahụ ị ga-asa ezé mgbe ị ka ha gwusia. E nwere ugbu a Obere mkpịsị aka brushes dị na nwere ike inye ìhè abrasive ka ezé ebe. Ndị a nwere ike ịbụ a kemfe ọzọ ka na-enwe a atu na ị oge. The ahịhịa si roughness bụ ihe na-akawanye ezé gị ọcha.
NDỤMỌDỤ! Ọṅụṅụ dị ka red wine, kọfị na soda a ga-iwesa na njikọ na otu iko mmiri. Ụfọdụ aba n'anya na-nnọọ ngwa discolor ezé, na-aṅụ ha mgbe nile nwere ike ime ka staining.
Ihe mbụ ị ga-eme ihe ọ bụla enwu gbaa nke ezé omume na-hụ na ị na-ọkachamara cleanings. Bilie gị ezé professionally kpochara ọ bụla ọnwa isii ma na-eme gị ọzọ oge atọrọ mgbe ke ụlọ ọrụ maka gị ugbu a ihicha.
Mkpa ka ị nnọọ anya mgbe eri ma ọ bụ na-aṅụ mgbe nwere ezé gị whitened. Ezé ọzọ yiri ka n'iku mgbe ha na e whitened. Gbalịa izere ihe oriri na nwere ọchịchịrị na agba mgbe ị whiten ezé gị. Kọfị, dị ka ọmụmaatụ, bụ ezi ihe nlereanya nke a nwere na n'iku-eme onunu na ezé gị ga-susceptible ka.
NDỤMỌDỤ! -Eji strawberries dị ka a eke ezé whitener. The eke ogige dị na strawberries ga whiten ezé n'ejighị ọgwụ.
Ezé gị nwere ike na-aghọtakwu whitening na ngwaahịa. Nwere ike ọ gaghị afụ ụfụ ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ ka na-ewute ọtụtụ. Kwụsị iji ngwaahịa na-aga ịhụ gị dọkịta ezé ozugbo o kwere omume. O nwere ike nwere ike ikwu na a ụdị ngwaahịa na gaghị Mmetụta ezé gị na ụzọ.
NDỤMỌDỤ! Gụọ ihe ndị na ntụziaka nke ebe obibi enwu gbaa na ngwaahịa kpamkpam tupu ịmalite usoro ọgwụgwọ. Ime nke a ga-dị nnọọ ka úkwù ezé na agbụ na-nanị ire ọkụ, ọnụ na-mgbakasị, na ezé gị na-emebi.
Mkpụrụ osisi ndị a ukwuu, na eke ụzọ whiten ezé whiteners. Otu di na nwunye ihe atụ nke magburu onwe mkpụrụ osisi nke nwere ike whiten Ezé oranges na oroma. I nwere ike iji ihe oroma bee megide elu nke ezé gị.
Mouthwash freshens gị ume ma na-egbu germs na nwere ike ime gingivitis; Otú ọ dị, ụdị ụfọdụ nke mouthwash nwere ike discolor ezé gị. Jiri a mouthwash na-adịghị aka ike ma hụ na ọ bụghị a egbuke egbuke na agba.
NDỤMỌDỤ! A ijuanya ụzọ whiten ezé gị a bit bụ site na iji eke strawberries. Ndị mmadụ ji na strawberries dị ka a home whitener ruo ọtụtụ afọ.
Mgbe ntacha eze na whitening ntacha eze-adịghị iche ukwuu. Izere ịdaba n'ihi oké ọnụ na ngwaahịa na anaghị arụ ọrụ. Ị ga-atụ nnọọ amapụtakwa ego efep.
Ị nwere ike ime ka gị onwe enwu gbaa ntacha eze na ụfọdụ peroxide na mmiri soda. Ekwe ka a tapawa ịba porous n'elu ezé gị maka ise ruo nkeji iri tupu brushing. Adịghị asa ezé gị obi ọjọọ, ọ ga-enwe a aka na iwe gị goms.
NDỤMỌDỤ! Ịkpachara anya na-eji ezé enwu gbaa na ngwaahịa kpọmkwem dị ka a gwara. Ezé whitening na ngwaahịa nwere ike a corrosive ma ọ bụ imetụta on nha nha Enamel, goms na ọbụna irighiri akwara.
Otu ụzọ isi acha ọcha ezé ga-anọgide na-acha ọcha bụ melite mgbe eze na-cleanings.
A ntụsara ahụ isi dịtụrụ gị ọchị bụ ka nanị dochie gị ugbu a ntacha eze na a whitening ntacha eze. Nke a ntacha eze na-akpan formulated na-ewepụ stains na ihe e dere ede dị ka ọ na whitens. N'ime ogologo oge nke oge, ị ga-ahụ acha ọcha ezé na-ebelata stains.
NDỤMỌDỤ! Cheta na okpueze bụ a dị iche iche umi karịa gị eke ezé, na adịghị azaghachi ezé whiteners. Whitening ezé gị nwere ike ime ka nkekọ na-ekwekọghị na agba ngosi ma ọ bụrụ na gị okpueze nwere ike hụrụ mgbe ị ọchị.
Zere ezé-staining n'anya ma ọ bụrụ na ị chọrọ ha ka ha na-acha ọcha ezé. Ihe ụfọdụ ndị a na-aba n'anya na-agụnye kọfị, kọfị na omenala tii. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji zere staining unu na-aṅụ ndị a, tụlee sipping mmiri n'etiti sips nke gị onunu na-ebelata staining.
Kwụsị whitening ezé gị ma ọ bụrụ na ọgwụgwọ na-akpata ihe mgbu ma ọ bụ uche. Whitening na ngwaahịa nwere ike mgbe ụfọdụ-amụba uche na ka mbufụt. Ọ bụrụ na nke a mere, kwụsị iji whitener ozugbo, na-agwa gị dọkịta ezé banyere a dị iche iche ngwaahịa nke ahụ ga-adabara mwute ezé.
NDỤMỌDỤ! Chase ọṅụṅụ na-eme ka stains na mmiri. Mgbe i nwere ụfọdụ mmiri mgbe a gbara ọchịchịrị mmiri mmiri (kọfị, tii, pop, etc.
Eri ihe udara na ngwa ngwa dịtụrụ gị ezé ma ọ bụ nwere ọdịdị nke acha ọcha ezé. Crunchy oriri na akwụkwọ nri nwere abrasive àgwà nke pụrụ inyere gị ọcha ezé gị na-enweghị na nnukwu mmebi na gị Enamel.
Gwa onye gị na dọkịta ezé maka a jel na nwere ike tinye n'ọrụ n'ụlọ na-enyere whiten ezé gị. Nke a na usoro-agụnye njikere nke a ekwuchite nke jupụtara jel. Ị na-eyi ya maka a ụfọdụ ego nke oge kwa abalị abụọ ma ọ bụ atọ na izu. Ezé gị nwere ike inwe ihe dị ka asatọ shades acha ọcha site na iji obibia.
NDỤMỌDỤ! Dọkịta ezé nleta dị oké mkpa na-acha ọcha ezé. -Ewu ndokwa cleanings ndụ gị bụ isi ihe na-acha ọcha ezé.
Kwụsị eji ihe ọ bụla whitening ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na ị na-eche uche gị ezé-aghọ enwe mmetụta ọsọ ọsọ. Ị kwesịrị ịkpọ gị dọkịta ezé ndụmọdụ ebe ọ bụ na ị nwere ike na-eme n'ezie mmebi ezé gị. Ị ga-agwa gị dọkịta ezé enwee ike ịghọta ihe nhọrọ ndị kacha mma n'ihi na ị na mgbe ọ na-abịa enwu gbaa nke ezé.
-Asa ezé-adị kwa ụbọchị bụ ụzọ kasị mma na-ha mma, na ichebe ha megide cavities, na unsightly staining. Iji a whitening ntacha eze na-akwa ụzọ ka mma ọdịdị gị ezé. E nwere ọtụtụ nhọrọ, otú ime nnyocha ụfọdụ, na ọ ga-enyere ị na-ahụ ndị kasị mma enwu gbaa ntacha eze maka gị mkpa.
NDỤMỌDỤ! Ị ga-enwekwu obi ike banyere ọnụ ọchị gị ma ọ bụrụ na ị bụ ọzọ nwee obi ike banyere gị ume. Licking gị n'ọbụ aka aka (-asa aka gị mbụ!) nwere ike ịgwa gị ma ọ bụrụ na gị ume ọjọọ ma ọ bụ na.
Asa ezé gị anya ma ọ bụrụ na i nwere a ukwuu smile.Food na ọṅụṅụ nwere ike iru on ezé gị na discolor ma ọ bụ n'iku ha mgbe oge ụfọdụ. Ị gaghị enwe nchegbu banyere achagharị ezé gị ma ọ bụrụ na ị na ịnọgide na-enwe mgbe nile a mgbe nile ezé-brushing eme.
Cheta na ọ dị mkpa flossing ezé gị na a mgbe niile. Flossing ọkọkpọhi irighiri n'ime ezé gị na-akpata ịlụ ọgụ e dere ede, nke-achagharị. Ị kwesịrị ị na-enye gị ezé a flossing mgbe ọ bụla nri; floss bụ obere ezu na ị nwere ike na-ebu ya na ị mgbe ị na-eri n'ụlọ. Tupu ị lakpuo ụra n'abalị, ọ dị ezigbo mkpa ka floss ezé gị ka i wee tufuo mkpari bacteria na pụrụ ịbịa n'ọnụ gị.
NDỤMỌDỤ! zere kọfị, tii, colas na ndị ọzọ na ọchịchịrị acha ọṅụṅụ na-ezé gị ha whitest. Onye ọ bụla n'ime ndị a na-aba n'anya ga-eme ka ezé gị na-discolored.
Aṅụ naanị doro anya ọṅụṅụ maka ụbọchị ole na ole mgbe ị malitere ezé gị whitened.
Igbute on ọṅụṅụ, dị ka soda pop ma ọ bụ wine, ga-enyere gị nwere acha ọcha ezé. N'ihi na soda na mmanya nwere ike n'iku ezé gị, i nwere ike ichebe a na-acha ọcha ọnụ ọchị site na-aṅụ na-erughị nke ma. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ha, ezie na, asa ezé gị ozugbo o kwere omume ke ama irepịa ha. Nke a ga-enye ha obere oge n'iku ezé kwa merụsịrị.
NDỤMỌDỤ! Ka gị ezé acha ọcha, i nwere ike iji n'ụgbụgbọ si a ukpa osisi. Rubbing a na ezé gị juputara ọcha ha na-eme ka ha acha ọcha.
Nke a bụ a usoro na-efu ọzọ, ma ọ na-enye gị ngwa ngwa na-arụpụta.
-Aṅụ ibu quantities nke mmiri ara ehi oriri. Mmiri ara ehi na ngwaahịa nwere minerals, dị ka calcium, nke ga-gị na ezé na-achọ ahụ ike. The Enamel ezé gị ga-esikwu ike ma na-erughị susceptible ka achagharị. Mgbe ị na-gụnyere ndị a nri ụdị n'ime ihe oriri gị ị na-enye onwe gị a acha ọcha ọnụ ọchị.
NDỤMỌDỤ! Asa ezé gị na a mmiri soda na peroxide mado na whiten ha. Ma Efrata na-ejikarị na whitening toothpastes, na ọtụtụ ndị na-ha n'ebe obibi ha.
Eri nri na mkpụrụ osisi na-fibrous udidi nke nwere ike eme ihe dị ka a eke scrubber maka ezé gị. A atụ ole na ole nke ihe oriri na-atụle na-agụnye apụl, apụl, kukumba na carrots. Eji gị niile ezé-ata elu crunchy nri na-kacha mmetụta.
Adịghị ese siga sịga ma ọ bụ sịga ma ọ bụrụ na i nwere ike inyere ya. Ndị a ma na-mara ime ka a achagharị nke ezé. Ịkwụsị ịṅụ sịga ga-enyere gbochie yellowing nke ezé. E nwere ọgwụ nke nwere ike n'ụzọ dị irè-enyere gị aka ịkwụsị ise siga ma ọ bụrụ na ị gaa a dọkịta. Ị ga-enwe kwesịrị ekwesị ndụmọdụ na nkwado.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ na ha nwere acha ọcha ezé. Ihe bụ nsogbu bụ na ọtụtụ ndị adịghị kwere na ha nwere ike whiten ezé, n'ihi ya, ha mgbe ọbụna na-agbalị. Ịgbaso Atụmatụ na usoro site na nke a n'isiokwu ga-enye gị mara mma-acha ọcha ezé na nnọọ obere oge.
Categories: Home Dabere na whiten Ezé Tags: -acha ọcha ezé, Whitening Ezé Atụmatụ, Whitening Ezé Atụmatụ Ị Pụrụ nwalee Today!